Tag: ihe bụ pestle | Martech Zone
Tag: gịnị bụ pestle?
Ihe 12 na - emetụta Strategy Email International Gị
Tuesday, April 12, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Anyị enyerela ndị ahịa aka na mba ụwa (I18N) na, n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụghị ihe egwuregwu. Nuances nke ngbanwe, ntụgharị, na nhazi akụkụ na-eme ka ọ bụrụ usoro dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ọ meela ihe ọjọọ, ọ nwere ike ịbụ ihe ihere na - eme ihere… ịghara ịkpa oke. Mana 70% nke ndị ọrụ ijeri 2.3 nke ụwa abụghị ndị na-asụ Bekee, ihe ọ bụla $ 1 ejiri rụọ ọrụ achọtara nwere ROI nke $ 25, yabụ ihe mkpali dị maka azụmahịa gị